Home Wararka Madaxda Qoomiyadda Oromada oo sheegtay in ay difaacayaan MW Farmaajo (Aqriso)
Madaxda Qoomiyadda Oromada oo sheegtay in ay difaacayaan MW Farmaajo (Aqriso)
Jawar Maxamed oo ka mida hogaanka Qoomiyadda Oromoda isla markaana xiriir wada shaqayn kala dhaxeeyso Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmad ayaa barahiisa bulshada soo dhigay qoraal uu ku difaacayo Madaxweyne Farmaajo. Jawar Maxamed ayaa sheegay waxa lagu hasyto MW Farmaajo in ay tahay been abuur ay ka soo shaqeeyeen qoomiyada Tigreeyada ma waxa uu ugu yeeray Weyena. Oromada ayaa waxaa dagaal kala dhaxeeyaa qoomiyada Tigreeda waxaana ay u muuqataa in Soomaaliya noqotay goob labada qoomiyadood ku dagaalaan.
Dhanka kale waxaa ka socda xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya qorshe la doonayo in lagu badbaadiyo Madaxweyne Farmaajo. Axmed Shide oo ka mida golaha wasiiradda ee Abiy Axmad ayaa sheegay in walwal ay ku hayso dowlada Itoobiya xaalada uu ku jiro Madaxweyne Farmaajo. Waxaana uu u sheegay saaxibadiisa in labada mas’uul ay qadka taleelfanka kuwada hadleen.
Previous articleSomali MPs aim to impeach president over Ethiopia, Eritrea ‘deals’
Next articleCherrie: The Scandinavian RnB star with Somali roots
Ciidamo ka wada tirsan dolwada fadaraalka oo ku dagaalamay Magalada...
[Faallo] Ujeedka dhabta ah ee shirka Rooble & Midowga Musharaxiinta wuxuu...